लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेडदरमा पुर्नविचार होस’ – Hamropati.com
प्रकाशित मिती: 10-05 at 5:45pm
१९ असाेज ।
चालुवर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि खासगरी लघुबित्त बैकर्स संघले तिब्र असन्तुष्टी जनाएको थियो । चालु बर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यतर्फ आइरहँदा लघुबित्त कम्पनीहरु के गर्दैछन ? उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? यसै सन्दर्भमा रहेर अर्जुन ज्ञवालीले नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघको अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :